एचआईभीको नयाँ भेरियन्ट नेदरल्याण्डमा भेटियो, निकै खतरनाक रहेको दाबी ! « KBC khabar
एचआईभीको नयाँ भेरियन्ट नेदरल्याण्डमा भेटियो, निकै खतरनाक रहेको दाबी !
२२ माघ २०७८, शनिबार २२:१४
काठमाडौं २२ माघ । नेदरल्याण्डमा एचआईभीको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको छ । नयाँ भेरिएन्ट भीबी पुरानो भन्दा निकै तीव्र गतिमा फैलने र शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई छिटै नोक्सान पु¥याउने बेलायती सञ्चारमाध्यम डेलीमेलले जनाएको छ ।